Haddii Mourinho Ama Guardiola Uu Saddex Champions League Oo Xidhiidh Ah Ku Guulaysan Lahaayeen Waxaa La Odhan Lahaa..... Zidane-na Waxa Uu U Baahan Yahay..... - Gool24.Net
Haddii Mourinho Ama Guardiola Uu Saddex Champions League Oo Xidhiidh Ah Ku Guulaysan Lahaayeen Waxaa La Odhan Lahaa….. Zidane-na Waxa Uu U Baahan Yahay…..
Tababaraha xulka qaranka Algeria oo ah dalka uu asal ahaan ka soo jeedo Zinedine Zidane ayaa furay dood cusub kadib markii uu tilmaamay in Zidane aanu helin ixtiraamkii uu ugu qalmay in uu yahay tababaraha kaliya ee taariikhda saddex jeer oo xidhiidh ah ku soo guulaystay koobka Champoins league.
Macalinka xulka qaranka Algeria ee Djamel Belmadi ayaa ku dooday in haddii Jose Mourinho ama Pep Guardiola ay ahaayeen lahaayeen kuwa min saddex jeer oo xidhiidh ah ku soo guulaystay Champions league in loo aqoosan lahaa kuwo khaas ah oo ayna jirin cid la mid ahi.
Hadalka Belmadi ayaa ku soo beegmay maalmo kooban ka hor waqtiga uu Zidane wajihi doono Pep Guardiola ee kulanka lugta labaad ee wareega 16ka Champions League.
Manchester City ayaa guul ku soo gaadhay kulankii Santiago Bernabeu waxayna kulanka lugta labaad haystaan fursad wayn laakiin Zidane ayaa doonaya in uu sameeyo soo laabasho si uu koobkiisii afraad ee Champions league ugu tartamo ee kooxdiisa Madrid.
Tababaraha xulka Algeria ee Djamel Belmadi ayaa yidhi: “Waxaan la dhacsanahay Guardiola, Klopp, Zidane, ayaynaan ilaawin in Zidane uu tababare wayn yahay”.
Intaas kadib Belmadi ayaa dood ka dhigay sababta ay Mourinho iyo Guardiola ugu heli lahaayeen magac ka wayn inta uu Zidane ku helay saddexdii koob ee xidhiidhka ahaa ee UCL wuxuuna yidhi: “Haddii Mourinho ama Guardiola uu saddex waqti oo xidhiidh ah ku guulaysan lahaayeen, waxaynu iyaga ugu yeedhi lahayn in ay khaas yihiin”.
Tababaraha Algeria ee Belmadi oo u waramayay L’Equipe ayaa hadalkiisa raaciyay: “Zidane waa khaas, xataa haddii aanu kacaamayn ka samayn ciyaaraha. Dhinaca kale waxaynu ka hadlnaa falsafada tababarayaasha qaar kuwaas oo aan waligood waxba ku guulaysan”.
“Muxuu waqtigu yahay? Muxuu yahay waxa aynu doonaynaa? Miyaynu dadka ku xukumaynaa in ay wax ku guulaysteen mise waa falsafada ugu fiican? Jamaahiirtu waxay ka filayaan in aad guulaysato”.
Hadalka Djamel Belmadi ayaa ah mid xaqiiqda ku salaysan maadaama oo aanu Zidane helin ixtiraamkii iyo amaantii uu ugu qalmay in uu yahay macalinka kaliya ee saddex xili ciyaareed oo xidhiidh ah ku soo guulaysatay Champions League.
Laakiin markii la filayay in uu helo ixitaamkii ugu waynaa ee uu koobkii saddexaad ee Champions League uu Madrid kula guulaystay sanadkii 2018 kii ee finalkii Liverpool waxa uu kooxdiisa Madrid kala kulmay arimo keenay in uu xataa shaqada iska casilay.
Laakiin markii uu Florentino Perez ogaaday qaladkii uu sameeyay ee ay Madrid u jabtay saamayntii Zidane waxaa lagu qanciyay in uu kooxda ku soo laabto dhamaadkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay taas oo keentay in xili ciyaareedkan uu kooxdiisa Madrid ku hogaamiyay koobka La Liga.
Laakiin Zidane waxaa hadda horyaal hal xidhaale wayn oo ah kulanka Manchester City waana kulan saamayn toos ah ku yeelan kara qiimaynta xili ciyaareedka Madrid maadaama oo Perez uu doonayo in kooxdiisu ay qayb ka sii ahaato Champions League.